इ सेवा लगायत अनलाइन सिष्टमकाे कारण पर्यटन क्षेत्रकाे मुनाफा घटेकाे व्यवसायीकाे गुनासाे-Setoghar
श्याम सत्याल, प्रबन्ध निर्देशक, काइनेटिक ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.
विगत १८ बर्ष देखि पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रही टिकटिङको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्याम सत्याल हाल काइनेटिक ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. सञ्चालन गर्दै आएका छन् । युवा पर्यटन व्यवसायीको परिचय बनाएका सत्याल आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रको राम्रो सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
पछिल्ला बर्षहरुमा आफ्नो कम्पनीबाट टुर प्याकेजहरु सञ्चालन गर्दै आएका सत्याल पछिल्लो समय मानिसहरु लागि एक ठाऊँबाट अर्को ठाऊँमा भ्रमणमा जाने प्रचलन बढेको र कारोबार ठुलो आकार समेत बढ्दै जानुले यस क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेको देखिएपनि राज्यका नीतिहरुको कारण पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न सबै व्यवसायीहरु टिकिरहन भने समस्या रहन सक्ने बताउँछन् । पछिल्ला बर्षहरुमा आफ्नो कम्पनीबाट टुर सम्बन्धि गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएका सत्याल अब छिट्टै होलिडेज प्याकेजहरु समेत सञ्चालन गरी नेपालीहरुलाई विदेशमा भ्रमणको लागि पठाउने योजना बमोजिम अघी बढेका छन् ।
नेपालमा पछिल्ला बर्षहरुमा टिकटिङ क्षेत्रबाट कारोबारको अनुपातमा मुनाफा घट्दो छ । खासगरी पछिल्ला बर्षहरुमा अनलाइन सिष्टममा आधारित रही सेवा दिँदै आएका इ–सेवा लगायतका कम्पनीले अनलाइन सिष्टमबाट समेत अन्य विविध सेवाको अलावा विशेष छुटममा बस टिकट बुकिङ लगायतका सेवा प्रदान गर्ने प्रचलन विकास भएसँगै अहिले ट्राभल एवं टिकटिङ क्षेत्रमा काम गर्ने एसेन्सीको कारोबारबाटै धानिनै नसक्ने अवस्था सृजना हुँदैछ ।
राज्यले व्यवसायीबाट लिने कर एवं राजस्व त बढाएको छ । तर सोही बमोजिम व्यवसायी व्यवसायमा कसरी टिकिरहेका छन् ? व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ? । राज्यका नीतिहरुले व्यवसायलाई कसरी प्रभावित पारिरहेका छन् भन्नेमा भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन । साथै राज्य अहिले ट्राभल एजेन्सीलाई पछिल्लो समय सेवा शुल्क समेत लिन नपाउने समेत भनिसकेको छ, यदि हामीले सेवा शुल्क पनि लिन नपाउने हो भने हामी कसरी यो व्यवसायमा टिकिरहने त ? के राज्यले यस व्यवसायबाट राज्यलाई राजस्व सङ्कलन र रोजगारी प्रवद्र्धनमा पुगेको योगदान र यसको विकल्पको बारेमा केही सोच्नुपर्दैन ?
किन आउँछन् विदेशी पर्यटक नेपालमा ?
पछिल्लो समय विदेशीहरुले नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले निकै नै महत्वका साथ हेर्न थालेका छन् । यसैकारण विदेशीहरु घुमफिरको लागि नेपालमा आउने गरेका हुन् । वास्तवमा नेपालमा बाह्य मुलुकको तुलनामा पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । नेपाल प्राकृतिक रुपमा नै सुन्दर छ । अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालको भौगोलिक संरचना समेत निकै नै राम्रो छ । यद्यपि अहिलेको अवस्थामा नेपालले भने नेपाल भित्रको सम्भावनाहरुको पहिचान गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालीहरुले विदेशमा घुम्नु भन्दा पनि पहिले नेपालका हिमाली, डाँडाकाँडा, भन्ज्याङ, खोलानाला, जङ्गली क्षेत्र लगायतमा घुमफिर र मनोरञ्जनका लागि थप सम्भावना सृजना गर्न सकिन्छ ।
कम लगानीको क्षेत्र
कम लगानीमा काम शुरु गर्न सकिने साथै राम्रो मुनाफा समेत भएको क्षेत्र हुनाले यस व्यवसायबाट धेरैले राम्रो आर्थिक लाभ लिन सकेका छन् । राम्रो तवरले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कला हुने हो भने पर्यटन क्षेत्रबाट राम्रो आर्थिक लाभ समेत लिन सकिन्छ । यसैकारण पछिल्लो समय नेपाली युवाहरु पर्यटन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न निकै नै लालायित समेत छन् । यद्यपि यस क्षेत्रको थप प्रवद्र्धनको निम्ति भने यस क्षेत्रलाई कसरी अघी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा भने हामी गम्भीर बन्नु जरुरी रहन्छ ।
पदयात्राको निम्ति पदमार्गमा परेको अवरोध
नेपालमा अहिले पर्यटकहरुको निम्ति विगतका पदमार्गहरु सडक विस्तार सँगै विस्थापित भएका छन् । सडकको पहुँचले यातायात सहज बनेको भएपनि यसबाट नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताबीच मनोरम दृष्यहरुको अवलोकन गर्दै यात्रा गर्न पाइने अवस्था भने कम भएको छ । यस्ता पदमार्गको संरक्षण र थप प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिनु जरुरी छ ।
अहिले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा पर्यटन व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुले कारोबार बापत प्राप्त गर्ने कमिसन घटेको छ । प्रत्येक बर्ष राज्यले विभिन्न नीतिहरु तय गर्दै अहिले सम्म आइपुग्दा अत्यन्तै न्यून सेवा शुल्कमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
साथै निजी क्षेत्रले आफ्नो जोखिममा ठुलो रकम लगानी गरेर कम्पनी दर्ता गरी वैधानिक तवरले राज्यलाई शुल्क समेत तिरेर आफ्नो पारिवारिक आर्थिक व्यवस्थापन एवं रोजगारी सृजना गरिरहेका व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नु के राज्यको दायित्व भित्र पर्दैन ? व्यवसाय टिकेमात्र राज्यले पनि विभिन्न सेवा शुल्कहरु प्राप्त गर्ने हो । यो कुरा राज्यले पनि बुझ्नु जरुरी रहन्छ ।
अहिले नेपालमा टिकटिङ क्षेत्रको कारोबार बढेको छ तर प्रतिष्पर्धा समेत अत्यधिक बढेको कारण प्रतिष्पर्धी बजारमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । फरक तवरले सेवा विस्तार गर्न र पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्नको लागि आकर्षक प्याकेजहरु ल्याउन सकेमात्र बजारमा टिक्न सकिने अवस्थामा सोही बमोजिम अघी बढ्नु जरुरी छ । प्रविधिको विकासले पनि सेवा विस्तारमा सहजता आएको छ तर व्यवसायीको मुनाफा घटेको छ ।